मुख्य समाचार « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
अनुहार र नागरिकता हेर्दा नेपाली जस्तै लाग्ने दलालबाट मुलुकमाथि आक्रमण : रिमाल
हरिशरण न्यौपाने ,काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्टका) अध्यक्ष विष्णु रिमालले संबिधान जारी भएपछि मुलुकमाथि चौतर्फी आक्रमण भईरहेको बतएका छन् ।
बुढीगण्डकी आयोजनालाई जग्गा अधिग्रहण शुरु
काठमाडौ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले प्रक्रिया थालेको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि धादिङको जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयले माग्यो सुझाव
काठमाण्डौं । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाब दिन बैशाख १५ गतेसम्मको म्याद तोकेको छ । बजेटबारे सुझावका लागि सर्वसाधारण, नागरिक समाज एवं बुद्धिजीवीहरुलाई आग्रह गरेको छ । महाशाखाले
जोडियो ‘प्यूठान–अर्घाखाँची सडक’
केशर रोका, प्यूठान । बांगेमरोठ सौतामारे–विड्डाँडा हुँदै अर्घाखाँचीको गोखुंगा जोड्ने साढे आठ किलोमिटर सडक पुरा भएको छ । सडक निर्माणको काम पुरा भएपछि विहिवार औपचारिक कार्यक्रम गरी नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य एवं
सहकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको दोहोरी !
काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछाडि पारिएका र असङ्गठित समुदायलाई सङ्गठित पार्ने माध्यमका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् भने उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर
के होला त माथिल्लो कर्णाली खारेज ?
काठमाण्डौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना खारेजीको लागि माथिल्लो कर्णली बचाउँ अभियान नामक समिति गठन गर्दै सम्झौता खारेजीको आन्दोलन सुरु भएकोछ । भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरसँग भएको सम्झौता पीडीए खारेजीका
२४ करोडको हिनामिना गर्ने व्यक्ति एक वर्षपछि पक्राउ
काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रोब्लम बैंक रिजोलुसन डिभिजनले २४ करोड हिनामिना गरेको अरोपमा दोषी ठहर गरेपछि फरार रहेका व्यक्तिलाई कार्यक्रममै सहभागी भइरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेकोछ । डिभिजनले आयोजना
चीनसँग बाटो खोल्न सर्वसाधारण नै अघि सरे, सरकारको मुख नताक्ने
मुस्ताङ । उपल्लो मुस्ताङवासीको अग्रसरतामा चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने समर–भियना सडकको मर्मत सुरु गरिएको छ । जोमसोम–कोरला सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने उक्त सडकखण्डलाई उपल्लो मुस्ताङको प्रवेशद्वार मानिन्छ । सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिने
११ उद्योगमाथि सरकारले चलायो मुद्दा, यस्तो थियो कारण
मोरङ । पूर्वाञ्चलका ११ उद्योगका उत्पादनविरुद्ध क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले मुद्दा चलाएको छ । गत मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको चार महिनाको अवधिमा बजार अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत खाद्य
सरकारमा आउन चाहे सिधै केपी ओलीसँग भन्नुस, छड्के आँखा लाउने बेला हैन : भट्टराई
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले आगामी दुई वर्षभित्र हुने आम निर्वाचनको समयसम्म प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल, रासस शाखाको दोस्रो अधिवेशन